အလှသိပ်မပြင်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေရထားတာလည်းတစ်မျိုးကံကောင်းပါတယ်…. – Trend.com.mm
Posted on July 1, 2018 June 28, 2018 by Shun Lei Phyo
တစ်ချို့ကောင်မလေးတွေရှိပါတယ်(ဥပမာ-ကိုယ်လိုပေါ့ 😛 ) မိန်းမတန်မဲ့အလှမကြိုက်တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး ၊ သိပ်အလှကြိုက်တာပေါ့ သိပ်လှချင်တာ သိပ်ပြင်တတ်ချင်တာဒါမဲ့ မပြင်တတ်ကြတာပါ။ မပြင်တတ်ဖူးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ဖရိုဖရဲနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပင်မဲ့သူ့ဘာသူသပ်သပ်ခပ်ခပ်တော့ဝတ်တတ်စားတတ်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေပါ။ ဆိုတော့ဒီလို သိပ်အလှမပြင်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုရထားတဲ့ကိုကိုတွေလည်း ရှာကြံတွေးကြည့်ရင် ဒါမျိုးလေးတွေကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်…
အရမ်းအလှပြင်တတ်နေလို့သိပ်လှနေရင် ကိုယ်ရှိမှန်းသိနေတောင် လာကြောင်မဲ့ကောင်တွေခပ်များများရယ်ပါ။ ခုလိုမပြင်တတ်မဆင်တတ်ကလေးဆိုတော့လည်းကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ချစ်လို့မ၀နိုင်ဘူးပေါ့လေ…အဲ့လယ်…။
ချိန်းတွေ့မဲ့နေ့တွေဘာတွေမှာဆို မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့အချိန်ပေး နေရလို့ချိန်းထားတဲ့နေရာကိုနောက်ကျတာတွေဘာတွေအတွက်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။အလှပြင်တာကြာနေလို့စောင့်ရတာမျိုးတွေဘာတွေမရှိဘူးပေါ့လေ။
(၃) Budget Save ပိုဖြစ်တယ်
မိတ်ကပ်တွေအလှပြင်ပစ္စည်းတွေသိပ်မသုံးတတ်လို့ တော်ရိလျော်ရိ လောက်နဲ့တင်မြင်ကောင်းရှုကောင်းအောင်ပြင်တတ်တာကြောင့်အလှပြင်ပစ္စည်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေပါတယ်။ တစ်ခြားသူ့အတွက်လိုအပ်မဲ့အရာတွေကို လက်ဆောင်ပိုပေးလို့ရတာပေါ့။
(၄) မိန်းမသိပ်မဆန်လွန်းတော့ တစ်ခါတစ်လေဘော်ဒါကောင်လေးတစ်ယောက်လိုမြင်လို့ပေါင်းလို့ရတယ်
မိန်းမသိပ်မဆန်လွန်းတဲ့အပြင်အဆင်တွေကြောင့်လည်း ဘယ်သွားသွားကောင်မလေးလိုရော ဘော်ဒါကောင်လေးတစ်ယောက်လိုပါ ပေါင်းသင်းလို့ရတာလေးကလည်းကြံဖန်ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲ။
မိန်းကလေးတိုင်းမှာသဘာဝအလှတရားကိုယ်စီရှိပြီးသားပါ။ ပြင်ထားဆင်ထားတဲ့အလှပတွေအောက်မှာသာမြင်သာထင်သာမရှိဖြစ်သွားကြတာပါ။ ယူတို့ကတော့ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။ယူတို့ကောင်မလေးတွေက ဘာမှသိပ်မပြင်တတ်တာကြောင့်သူတို့နဲ့တွေ့တိုင်း သူ့တို့ရဲ့သဘာဝအလှတွေကိုတစ်ဝကြီးခံစားလို့ရမှာအသေချာပါပဲ….
ဒါကြောင့်ကိုယ်ချစ်သူအလှမပြင်တတ်လည်း သူ့ရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေကို နားလည်ပေးပြီးရှာကြံကျေးဇူးတင်ပြီး ပိုချစ်ပေးနိုင်ကြပါစေ…
တဈခြို့ကောငျမလေးတှရှေိပါတယျ(ဥပမာ-ကိုယျလိုပေါ့ 😛 ) မိနျးမတနျမဲ့အလှမကွိုကျတာလားဆိုတော့လညျးမဟုတျပွနျဘူး ၊ သိပျအလှကွိုကျတာပေါ့ သိပျလှခငျြတာ သိပျပွငျတတျခငျြတာဒါမဲ့ မပွငျတတျကွတာပါ။ မပွငျတတျဖူးဆိုတဲ့နရောမှာလညျး ဖရိုဖရဲနတောမြိုးတော့မဟုတျပငျမဲ့သူ့ဘာသူသပျသပျခပျခပျတော့ဝတျတတျစားတတျကွတဲ့မိနျးကလေးတှပေါ။ ဆိုတော့ဒီလို သိပျအလှမပွငျတတျတဲ့ကောငျမလေးတှကေိုရထားတဲ့ကိုကိုတှလေညျး ရှာကွံတှေးကွညျ့ရငျ ဒါမြိုးလေးတှကေံကောငျးနတေတျပါတယျ…
အရမျးအလှပွငျတတျနလေို့သိပျလှနရေငျ ကိုယျရှိမှနျးသိနတေောငျ လာကွောငျမဲ့ကောငျတှခေပျမြားမြားရယျပါ။ ခုလိုမပွငျတတျမဆငျတတျကလေးဆိုတော့လညျးကိုယျတဈယောကျတညျး ခဈြလို့မဝနိုငျဘူးပေါ့လေ…အဲ့လယျ…။
ခြိနျးတှမေဲ့နတှေ့ဘောတှမှောဆို မိတျကပျလိမျးဖို့အခြိနျပေး နရေလို့ခြိနျးထားတဲ့နရောကိုနောကျကတြာတှဘောတှအေတှကျလညျးစိတျပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။အလှပွငျတာကွာနလေို့စောငျ့ရတာမြိုးတှဘောတှမေရှိဘူးပေါ့လေ။
(၃) Budget Save ပိုဖွဈတယျ
မိတျကပျတှအေလှပွငျပစ်စညျးတှသေိပျမသုံးတတျလို့ တျောရိလြျောရိ လောကျနဲ့တငျမွငျကောငျးရှုကောငျးအောငျပွငျတတျတာကွောငျ့အလှပွငျပစ်စညျးကွောငျ့ ကုနျကစြရိတျသကျသာစပေါတယျ။ တဈခွားသူ့အတှကျလိုအပျမဲ့အရာတှကေို လကျဆောငျပိုပေးလို့ရတာပေါ့။
(၄) မိနျးမသိပျမဆနျလှနျးတော့ တဈခါတဈလဘေျောဒါကောငျလေးတဈယောကျလိုမွငျလို့ပေါငျးလို့ရတယျ
မိနျးမသိပျမဆနျလှနျးတဲ့အပွငျအဆငျတှကွေောငျ့လညျး ဘယျသှားသှားကောငျမလေးလိုရော ဘျောဒါကောငျလေးတဈယောကျလိုပါ ပေါငျးသငျးလို့ရတာလေးကလညျးကွံဖနျကြေးဇူးတငျစရာပါပဲ။
မိနျးကလေးတိုငျးမှာသဘာဝအလှတရားကိုယျစီရှိပွီးသားပါ။ ပွငျထားဆငျထားတဲ့အလှပတှအေောကျမှာသာမွငျသာထငျသာမရှိဖွဈသှားကွတာပါ။ ယူတို့ကတော့ဂုဏျယူလိုကျပါ။ယူတို့ကောငျမလေးတှကေ ဘာမှသိပျမပွငျတတျတာကွောငျ့သူတို့နဲ့တှတေို့ငျး သူ့တို့ရဲ့သဘာဝအလှတှကေိုတဈဝကွီးခံစားလို့ရမှာအသခြောပါပဲ….
ဒါကွောငျ့ကိုယျခဈြသူအလှမပွငျတတျလညျး သူ့ရဲ့အားနညျးခကျြလေးတှကေို နားလညျပေးပွီးရှာကွံကြေးဇူးတငျပွီး ပိုခဈြပေးနိုငျကွပါစေ…
Posted in Beauty, Lifestyle, Relationships